Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDiana
Ifulethi elihle elinezixhobo ezilungele ukukhululwa, elikwizitepsi ezimbalwa ukusuka kumbindi wembali wesixeko sasePopayán. Kufuphi nesikhululo seenqwelomoya kunye netheminali yezothutho yesixeko esimhlophe. Ukhululekile, ukhululekile kwaye uxhotyiselwe ngokupheleleyo ukuhlala okuhle. Iicawe, iibhari, iindawo zokutyela, iivenkile ezinkulu, ibala lebhola elenziweyo kunye neendawo eziluhlaza zikhapha le ndawo.
Ifulethi elinezixhobo ezilungele ukukhululwa; Iqukethe igumbi eli-1 elizimeleyo kwigumbi lokuhlala kunye negumbi lokutyela. Igumbi linebhedi ephindwe kabini kunye nomatrasi wendawo yakho yokuhlala. Kwigumbi lokuhlala kukho ibhedi ye-sofa yomntu omnye; Inamanzi ashushu, i-Wi-Fi kunye ne-akhawunti ye-NETFLIX. Ikhitshi ixhotyiswe ngayo yonke into efunekayo ukuze uchithe ixesha elininzi lokuhlala. Inamanzi ashushu kunye nomatshini wokuhlamba. Isakhiwo sineekhamera zokhuseleko zabucala kunye nokufikelela kwisakhiwo ngekhadi elihlakaniphile.
I-TV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Netflix, I-Roku
4.87 ·Izimvo eziyi-69
Kufuphi nefulethi ungafumana enye yeepizzeria ezilungileyo kwisixeko "Primo's Pizza"; kwakhona esempilweni ice creams kwi "Yogen Fruz" kwaye ekugqibeleni ungadlala ibhola ekhatywayo kwibala zokwenziwa ukuba ngqo phambi.
Hlala uhoyile ukuphendula kwimiyalezo ebhaliweyo, iminxeba okanye ii-imeyile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Popayán